Ekuqaleni konyaka, kwaziwa ngomlando we-actor u-Yevgeny Tsyganov noYulia Snigir. Uthando izindaba ebhizinisini lokubonisa isikhathi eside akekho omangazayo, kepha lobu buhlobo babethusa ngempela ababukeli abajwayelekile nabasebenza nabo. Iqiniso liwukuthi ngenxa kaYulia Snigir, u-Eugene washiya umfazi wakhe womphakathi, ukhulelwe ingane yakhe eyisikhombisa. Ngokushesha uTyganov waba nguyise wesishiyagalombili - umthandi omusha wamnika indodana.
Ukuphila komuntu siqu ka-Eugene Tsyganov ngaleso sikhathi kwakubhalwe yizo zonke izinhlelo, kodwa umlingisi ngokwakhe, nomthandi wakhe, nomyeni wakhe owayengumyeni wakhe bathukuthele, bekhetha ukungaziphakamisi ezindabeni zakamuva.
Manje uTyganov uhlala noJulia Snigir nendodana yabo ejwayelekile, uFyodor. Ngokomngane womshado, umntwana usanda kubhapathizwa, futhi manje abazali ngokwabo bafuna ukushada.
Izihlobo zikaYulia Snigir zathola uVevenia Tsyganova
Lapho amahemuhemu okuqala evela ukuthi uJulia Snigir wayekulindele ingane evela kuYevgeny Tsyganova, abadlali bezemidlalo bakhe babengajabuli ngokukhetha kwakhe. Ngakho-ke, uyise we-actress enkulumeni nezintatheli wathi akafuni ukuzwa lutho ngoTsyganov.
Kubonakala sengathi ukuzalwa komzukulu wakhe kwashintsha isimo sengqondo sezihlobo zikaYulia kumkhwenyana wakhe. Ngakho-ke, lapho bexoxa nezintatheli, umkhulu ka-actress, uVictor Siriskin, uphawule ukuthi uthanda isimo sikaSyyanov ngesimo esingathí sina ngomzukulu wakhe. Lo muntu uqinisekile ukuthi uYulia no-Eugene baphelele omunye nomunye. Ngesikhathi esifanayo, umkhulu akaqondi ukuthi uTyganov wayenabantwana abayisikhombisa abashiye emndenini wokuqala:
UTyganov ungumuntu omuhle, onethalente futhi onakekelayo. Unabantwana abaningi, kodwa akabashiyi, usiza wonke umuntu. U-Yulia no-Evgeny bahola kahle, banomsebenzi omningi.
Umkhulu uJulia Snigir uyazi kahle izindaba zakamuva zomzukulu wakhe. Ngokusho kukaViktor Siriskin, lo mdlali ukhathalela umyeni wakhe, uhlangana naye ekhaya njalo ngesidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Futhi, izintatheli zathola ukuthi izitsha ezizithandayo zikaTyyanov ziyi-pasta ku-Navy ne-borsch.
Uhlolo lukaNicita Presnyakov lwaqala ibhizinisi ngemikhiqizo ephelelwe yisikhathi
Otar Kushanashvili akazange eze ohlelweni ngoJeanne Friske ngenxa yemali
Isaladi ye-mozzarella nama-utamatisi abhakiwe
I-Walnut iphaya nge-icing icing
Indlela yokukhetha i-jumpsuit yengane
Ukunakekelwa kwe-winter lip
Umculi uSlava waqhutshwa eMoscow amahora ambalwa adlule, ividiyo
Ingaphakathi lekhishi elithakazelisayo
Izinto "ze-Orange" ezinama-mushroom
Inkanyezi ye "House-2" yahleka u-Alian Ustinenko ngenxa yokugqoka kwakhe
Isimo sezulu eMoscow nasifundazweni saseMoscow ngo-Ephreli 2017 - isibikezelo esivela kwi-Hydrometeorological Center
Maxim Fadeev futhi "udakiwe" umfana: PR noma ...
Ukuxilongwa kwenkulumo yezingane ezincane nge-therapist
I-talisman eqinile kakhulu yothando lwe-feng shui